Shiftaan/OPDO/dha: Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa opdo tiif kennineerra ! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShiftaan/OPDO/dha: Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa opdo tiif kennineerra !
Shiftaan/OPDO/dha: Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa opdo tiif kennineerra !
Opdo’n Expired ta’ee jira:Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa opdo tiif kennineerra !
Diinni Saba oromoo 1ffaan shiftaa/OPDO/dha. Ijaarama isaa irraa kahe dhaabni opdo kun shiftaa Tplf tiif oromiyaa daandii itti agarsiisuu,Afaan hiikuu,waliin oromiyaa saamuu,oromoo hiisisuu fi ajjechesuuf dhaabbate.Kaayyoo biraa Hin qabu. Kaabinoonni opdo hundi Getacho Asefa ti. Harka Harka nyaatu Opdo’n .
Shiftoonni Maafiyaa Garee Tirgee lammii biyya Imaayera Ethiopia lafa irraa duguuga ture Geetachoo Asaffaa dabalatee baandoonni kaabinoonni opdo otoo nagaan jiraatanii har’as Sabin oromoo mirga isaatii falmatu ajjefaamaa fi hidhamaa jira. Qaama baandaa jaarmayaa opdo tiin Imimmaan ilmaan oromoo baraa baratti Hin dhaabbanne.Hini qoorre.Gaddii fi boo’iichi oromoo ittuma fufe.
Ormi ykn Ollaan garuu nagaan jiraachaa jira. Ajjeechaa fi hidhaan dhaaba kanaan Saba keenya irratti raawwatuf qaamni gaafatu Hin jiru.Ittuma Fufaa jira .
Yoom dhaabbata ???
Umurii isaa Guutuu waggoota 28 oliif dhaabni kun maqaa oromoo baafatee Yaroo TPLF jala tures haa ta’u,Yaroo dhiiga Qeerroon bilisa bahe kanallee otoo adda Hin citiin balleessaa hojjeteef illee dhiifama eega gaafatee boodas saamtota isaa qindeesse Ammas diinummaa oromoo irratti raawwachuu itti fufee jira.
Bakka dhaabni opdo jirutti yoomuu….
# Oromoon Ni salphata. Ni tuffatama.
# Mirgi oromoo Hin kabajamu.
# Quuqama oromoo Hin qaban.
# kan yakka oromoo irratti hojjete seeratti Hin dhiyaatu.
# oromoon nagaa,tasgabbii,guddina Hin argatu.
# ajjeefamuun ,hidhamuun,hiriirfamuun Hin dhabbatu.
# Tokkummaan oromoo Ni diigama.
# yartuu hundatu oromoo tti roorrissu.
# Qabsaa’oota dhugaa,Gootota,Hayyootaa fi beektota oromoo ofitti Hin butan.Lafa irraa Ni balleessu .
# yartoonni fi walaallonni opdo biratti ulfinaa ,guddina fi kabaja qabu.
# Opdo’n Kan jibba oromoo qabu bu’aa fi Aangoo dhunfaaf kan fiigan Ni jalatu.Ni guddisu.
Kkf oromoo irratti raawwachaa turan Ammas itti fufanii jiru.
Gocha fi yakka badaa Saba oromoo irratti raawwatu teenyee Hin ilaalluu Ni falmanna jechuun Qabsa’oonni oromoo bara dheeraaf lubbuu isaanii itti wareeganii jijjirama xiqqoo kana fidan.Garuu galma Hin geenye.Xumura Hin arganne.kan xumura argatu Filaannoo bariitu Gaafa oromoon abbaa isaa ta’u dhiibaa fi sodaa tokko malee filatee dha. Kana argachuuf Qeerroon keenya yaroof obse malee Opdo filatee ykn jaaltee miti.opdon ce’umsa kana hanga filannoo tti jarmoolee siyaasaa oromoo biroo waliin waliif tumsanii filannoo dhufuuf haala mijeessu jennee opdo irraa eegaa turre. Garuu dubbichi Tv fi walga’ii irraa harka reebsisuu malee lafa irratti waggaa tokkof waanti mul’atu tasuma hin jiru.
Opdo’n maqaa oromoo qabatanii yakka ilmaan namaaf Hin Malle oromoo irratti waggoota 28 tii ol geesisaniif Qerroo fi qarreen ,ummanni oromoo keessaa alaa Tokkummaan dhaabbatee TPlf ofirraa Tigry tti galchee opdo kiloo 4 seensisee Aangoo guddaa tti ol baase. Mormiin qabsoo Qeerroo oromoo Keessumaa waggoota arfan darbanii mootumma Eprdf burkuteessuu Ni Danda’aa ture. Mootummaa ture diignee haaraa ijaaruun biyya irratti miidhaa guddaa waan qabuuf opdo yaroof cimsinee tumsa ummata oromoo fi qabsa’ootan Gamtaan hanga filannoo tti waliin haa bulchanii ture. Garuu Rakkoo Opdo’n Guyyaa Guyyaa tti uumtuun ta’uu Hin dandeenye. Hanga filannoo tti Opdo’n badii oromoo irratti dalgeef dhiifama gaafte.
Hanga filannoo titis gaaffii oromoon gaafataa ture keessaa kan Yaroo gababaa akka deebistu waadaa galte. Gooftaan keenya ummata keenya jedhan.Lammaffaa oromoon Haangoof akka wal Hin ajjeefne waadaa galan. Ummanni fi Qeerroon oromoos hanga filannoo tti Nagaan bu’ee Haaraarri jaarmolee siyaasaa oromoo hunda hirmaachise godhamee Dimocracy’n sirrii ta’e diriiree Ummanni oromoo bilisummaa dhugaa awwaa ture dhiibbaa fi sodaa tokko malee ummanni keenya Mootummaa NAAF ta’a jedhe filatee akka ittiin buluuf gahuuf ture ,haarsaan Qabsa’oonni bara dheeraaf,Qeerroo fi qarreen dhiigni isaanii dhangala’e, lafeen cabe kanaaf ture.
Amma Garuu Abdiin ture ,Waadaan galame Gama Opdo’n haqameera. Goyyoomsu qofa ta’e.
Opdo’n/EPRDF Umurii isaa deebisee dheersuuf Injifannoo qabsoo ummataan argame ummata harkaa butee natu fide jechuu eegale. Muuxannoo Tplf irraa horataniin Opdo’n deebisee hojii dhuma isaanii duriitti deebi’aniiru. Waajiroolee Dhaabolee siyaasaa karaa nagaa qabsa’uuf jiran cufuu.Miseensota Paartii mormituu Sababa tokko malee hidhuu . Qeerroo fi qaarree opdo bilisa baase bakka hundaa deebisanii hidhuu.kkf raawwachuun cimee itti fufeera.
Mootummaan Opdo kun ummata biratti fudhatama waan hin qabneef filannoo dhufu dorgomanii darbuu waan hin dandeenyeef toftaa harka lafa jalaan Umna waraanaa fayyadamuun dirqiin qabsa’oota fi jaarmolee siyaasaa ciccimoo tti Taappeellaa sobaa maxxansuun Mootummaan maqaa Olaantum seeraa kabachiisuu jedhuun warreen jaarmiyoole ummata biratti fudhatama qaban of biraa ruktanii ummata burjaajessuun hanga isaanii danda’ametti Umurii dheereffachuu fi qabeenya saaman tiffikachuuf alkanii Guyyaa kaachaa jiru.
Ta’us Qabsoon Qeerroo oromiyaa opdo yakkamaa Aangoo irra baasuuf Hin turre.
Dhiibbaa tokko malee filannoon dhugaa akka biyyaatti gaggeeffamee jaarmoleen hundi itti hirmaatanii ummanni keenya abbaa isaaf ta’u gaafa filtee isaaniin bule bilsummaan awwiinu mirkana’a jennetu qabsa’aa jirra. Kayyoo qabsa’aafii jirru kana gufachisuuf hojjechaa jirti Opdo’n .
Malli fi falli oromoo maaliree ???????
#Red Card/Caardii Diimaa OPDO kennuu.
#Atattamaan otoo Biyyi Hin diigamiin hanga filannoo tti Opdo’n qobaa ishii nu ceesisuu waan dadhabdeef
>Tumsa jaarmolee siyaasaa gaafachuu.
>Tumsa Hayyootaa gaafachuu.
>Tumsa Qeerroo/qarree dabalachuu.
>Tumsa hirmaannaa ummataa dabalchuu.Kkf.
Yoo kana ta’e qofa jijjiramni dhufe kun fiixaan bahuu danda’a.Nageenye boora’aa jiru deebi’ee tasgabbaa’a.
Yoosi Oromiyaan nagaa argata.yoo Oromiyaan nagaa fi tokkummaa argate Ethiopia’n nagaa argatti.
Rakkoo biyyittii mudateef “dhibeen jiruuf Falli jiru ” kanuma. Warri opdo of beekaa maalummaa keessan Hin dagatiinaa.Opdon Odp ofiin Hin jedhiinaa .Waraabessi hoolaa jedhamuu Hin danda’u. Hidhaa fi ajjeefamuun Mootummaa yakkamaa shiftaa/OPDO/ tiif haa ta’u ! Araaraan ta’uu dide.yoo Bosanatti hafan shiftaa dha jedhu.Yoo karaa nagaa qabsoofna jedhani hidhaa dha.
Opdo’n baandaa dha.Oromoon Hin filanne.
Dhaaba baandaa Diina oromoo ta’e kana maqaa oromoo tiin daldaluu dhiisee gara “Dhaaba Baandaa Diina oromoo “jedhee of maggaasuu qaba. Opdo’n Diina oromooti !!!!!! Kadhaa fi jaarsummaan Bilsummaan Opdo irraa Hin argamu. Mallis Fallis qabsoo keenyaan Bilisummaa awwinu arganna !!!
Qabsoon oromoo TPLf Baha Africa tti sodaatamu diige OPDO baandaa samtuu harka kennisiisuun Qeerroof salphaa dha. Qabsoon itti fufu malee opdon fala jiruuf harka Hin kennattu.
Ammas Qabsoon Qeerroo itti fufa !!
Qeerroowwan Amboo irraa !
Amboo Yuunibarsiitii yeroo amma dhukaasaa waraana mootummaan goolamaa jira.